Vakawanda Pasi Rose Vochema Joseph Shabalala weLadysmith Black Mambazo
Muimbi wemuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLadysmith Black Mambazo akashaya nezuro kuPretoria.
Chikwata cheBlack Mambazo chakapihwa mibayiro yepamusoro munyaya dzemimhanzi kana kuti maGrammy Awards kanokwana kuita kashanu.
Kambo kavo, Swing Low Sweet Chariot kakaimbwa pamakwikwi eWorld Cup yemuna 1995 kakasvika pachidanho chegumi neshanu paBritish Chats.
Parizvino, chikwata cheLadysmith Black Mambazo chiri kushanya muAmerica uye chinoti charwadzikana rerufu urwu. Chichinyora padandemutande racho reTwitter, chikwata ichi chati charasikirwa nemudzidzisi, uye baba vaive nemoyo munyoro.
Chatiwo mimhanzi yake ichararama nekusingapere mumoyo yemamiriyoni evanhu pasi rose.
Hurumende yeSouth Africa yatumirawo mashoko enyaradzo kumhuri yaVaShabalala. Shabalala vakaberekwa muna 1941.
Shabalala anoti chido chake chaive chekuva chiremba kana mudzidzisi asi izvi hazvina kuzobudirira sezvo baba vake vakashaya ari mudiki achibva asiira chikoro panzira ave nemakore gumi nemaviri achibva atanga rwendo rwekuimba mumaraini nevamwe vechidiki kusvika azoumba chikwata cheLadysmith Black Mambazo kuma 1950 kuKwaZulu Natal.
Chikwata ichi chinoimba nziyo dzechiZulu uye isithakamiya. Mambazo zvinoreva kuti demo. Chikwata ichi chakabuda paradio muna 1970 zvakapa kuti chibva chatanga kuwana mukana wekutsikisa nziyo muna 1973 apo vakaburitsa dambarefu rinonzi Amabutho.
Asi mbiri pasi rose yakatanga apo chikwata ichi chakaita mushandirapamwe naPaul Simon muimbi wekuAmerica muna 1986 padambarefu rinonzi Graceland pane kambo kanonzi Homeless uye kanonazi Diamonds on the Soles of Her Shoes.”
Muna 1987, Shabalala, Miriam Makeba, Paul Simon naRay Phiri vakaridza muHarare vachitsigira Paul Simon apo aishambadza dambarefu rake Graceland.
Chikwata ichi chakapihwa mukana wekubuda pazvirongwa zvakaita seSesame Street, Broadway uye Tonight Show.
Muna 1993 apo VaNelson Mandela vakapihwa mubayiro weNobel Peace Prize uye pakagadzwa VaMandela kuve mutungamiri wenyika yeSouth Africa mutema wekutanga muna 1994, chikwara ichi chakapihwa mukana wekuimba.
Joseph Shabalala naVaNelson Mandela
Ladysmith Black Mambazo yakaimbawo nziyo namuchakabvu Oliver Mtukudzi. Kamwe kambo kavakaimba vose kavandudzwa ndi Neria. VeTuku Music avo vari kuchengetedza nhaka yamuchakabvu Tuku vanoti varwadziwa zvikuru nerufu urwu.
Mtukudzi naShabalala vakatanga kuzivana muna 1978 uye vainge vari vanasahwira vakatsikisawo kamwe kambo vose kanonzi Hello my Baby.
Chikwata ichi chakaimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Stevie Wonder, Dolly Patton nevamwe. VaMandela vakati chikwata ichi chaive vamiriri veSouth Africa munyaya dzetsika dzenyika iyi. Rufu urwu rwauya South Africa ichicherechedza makore makumi matatu VaMandela vaburitswa mujeri.
Nenyaya yekusanzwa zvakanaka Shabalala ange amira zvekuimba asi vana vake vanomwe vari muchikwata ichi.
Muna 2002, mudzimai waShabalala, Nelly aive mufundisi akapfuurwa akafa muna 2002 muDurban. Shabalala akakuvara chimhanyisa Mboneni Mdungwe uyo ainge apfuura mudzimai waka akazotongeerwa kugara mujeri kwehupenyu hwake hwose.